यी ४ राशिको कहिले पनि छोडदिनन् लक्ष्मीले साथ ! धनको भैरहन्छ वर्षात ! – Sandesh Press
November 28, 2020 362
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी ४ राशीप्रति धन कि देवी लक्ष्मी बढी दयालु देखिने गर्छिन । १२ राशी मध्ये यी ४ राशीका मनिसहरुले प्रसस्थ धन कमाउन सक्छन् । यी राशिका मान्छेहरुलाई जीवनभर महलक्ष्मीको आशिर्वाद मिल्ने हुदा आयआर्जन रामो हुने गर्दछ । यस्ता व्यक्तिहरुले घरमै बसीबसी धन कमाउछन् भन्ने छैन तर थोरै परिश्रमबाट नै सोचेभन्दा बढी कमाउने गर्छन । यसरि हुनेछन् यिनीहरु भाग्यमानी ! पुरा पढ्नुहोला :
यो राशिका मानिसहरु धेरै विशेष हुने गर्दछन् । यिनीहरु भौतक चिजका बढी सौखिन हुने गर्छन । यदि प्रकृतिमा उनिहरुले मनपराएका कुनै चिज देखेभने त्यसको प्राप्तिको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यसको लागि उनीहरु धेरै मेहेनत गर्ने गर्छन । धन आर्जनका लागि उनीहरु जस्तोसुकै काममा पसिना बगाई कडा परिश्रम गर्न तयार हुन्छन ।
Prevकक्षा ११ पढ्दा पढ्दै केटासंग भागेपछि सपना यसरी सडकमा पुगेकी थिइन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextमहाबिर पुनले गण्डकी प्रदेशलाई दिए “कोरोनाको स्वाब संकलन गर्ने गाडी”
स्पोर्ट बाइक चढेर स्टन्ट देखाउने युवती पक्राउ